Afganistan: Shan dumar ah oo ka shaqeynayay garoon diyaaradeed iyo darawalkoodii oo la dilay. – Puntland News
Home 2016 December 17 World News Afganistan: Shan dumar ah oo ka shaqeynayay garoon diyaaradeed iyo darawalkoodii oo la dilay.
Rag hubeysan ayaa toogasho ku dilay shan dumar ah iyo derawalkoodii oo shaqaale ka ahaa garoon diyaaradeed oo kuyaala koonfurta Afgaanistaan, waxaana weerarkaan uu sii kordhinayaa bartilmaameedka lagu hayo dumarka ka shaqeeya dalkaas.
Dumarka shaqaalaha ah ayaa xilliga weerar lala beegsanayay waxay la socdeen bas yar oo kusii jeeday garoonka oo kuyaala gobolka Kandahar, waxaana weerarkaan fuliyay saddex nin oo la socday Mooto, sida uu sheegay Samim Kheplwak oo ah afhayeenka gobolka Kandahar.
“Dhamaan dumarkii iyo derawalkoodii waa la dilay. raggii weerarka soo qaadayna way baxsadeen, anaguna waxaan bilownay baaritaan.” Ayuu yiri Samim Kheplwak.
Agaasimaha garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha Kandahar Ahmadullah Faizi ayaa sheegay dumarka la dilay inay ka shaqeynayeen shirkad gaar oo bixisa adeegyada boorsooyinka iyo adeega baaritaanka dumarka rakaabka ah.
Wuxuu sheegay dumarka inay ka walaacsan yihiin ammaankooda kadib markii ay soo gaareen hanjabaadyo uga yimid kuwa kasoo horjeeda xirfadahooda shaqo.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaan, laakiin dumarka Kandahaar ee ka shaqeeya meel ka banaanka ah guryahooda ayaa qatar weyn ugu jiray weeraro kaga imaanayay Mintidiinta Taliban iyo kooxo kale oo falaago ah.